‘आइईसी ग्रुपलाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्ने सपना छ’ |
05 Jul 2020 | आइतबार, २१ आषाढ, २०७७
स्वास्थ्य / शैली
अन्तवार्ता शनिबार, २६ चैत, २०७३
‘आइईसी ग्रुपलाई शैक्षिक हबका रुपमा विकास गर्ने सपना छ’
आइईसी कलेज अफ फेसन एण्ड आर्टसकी म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन्—शैलाजा अधिकारी । सन् १९९७ मा नेपालमै पहिलो पटक फेशन कलेजका रुपमा स्थापित आइईसीलाई नेपालको प्रतिष्ठित फेसन कलेजका रुपमा लिइन्छ । अहिले डिप्लोमा र ब्याचलरसमा फेशन र इन्टेरियर डिजाइनिङको अध्यापन गराइरहेको आइईसी कलेज मलेसियाको प्रतिष्ठित लिम कोक विङ युनिभर्सिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित छ ।
अधिकारीको आइईसीबाहेक विद्यालय शिक्षामा पनि लगानी छ । आइईसी ग्रुपलाई एक एजुकेशन हबका रुपमा विकास गर्ने सपना बुनेकी उनी चाडै एमबीए, होटल म्यानेजमेण्ट कलेज सञ्चालनका लागि पनि तयारी गरिरहेकी छिन् । महिला ब्यवसायीका रुपमा छुट्टै पहिचान बनाएकी अधिकारीसँग एजुकेशन समाचारले गरेको विशेष कुराकानीः
आइईसीले कहिलेदेखि पठनपाठन सुरु गरेको हो ?
हामीले पहिलो पटक नेपालमा फेसन पढाउने कलेजका रुपमा सन् १९९७ मा आइईसी सुरु गरेका हौं । अहिले हामीले नेपालमा फेसन पढाउन थालेको १९ वर्ष पूरा भएको छ ।
यो १९ वर्षको अवधिलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
१९ वर्षको अवधिमा कतिपय क्षणहरु यस्ता पनि आएका थिए कि मैले अब बन्द गर्नुपर्छ होला । किनभने त्यो बेला खाली घाटामात्र भइरहेको थियो । भाडा र स्टाफको स्यालरी तिर्दैमा हैरान भइसकेकी थिए । अब नगरौं धेरै भन्ने मनमा कति पटक आउथ्यो । तर, नेपालका लागि यो नयाँ करिअर प्रस्पेक्टीभ थियो, यसका बारेमा धेरैलाई थाहा थिएन् । जब मानिसहरुले फेसन डिजाइनिङका विषयमा बुझ्छन् त्यसपछि लुकिङ ब्याक हुन्छ भन्ने मैले सोचेर अगाडि बढिरहे । र, मैले यही सम्भावना र इच्छाशक्तिका बलमा आइईसीलाई टिकाउन सके ।
मैले त्यो समयलाई आर्जनको समयभन्दा पनि लगानीको समयका रुपमा हेरे । अहिले नेपाली फेसन इन्डष्ट्रीज त छदैंछ धेरै बाहिरी देशहरुमा पनि आइईसीको विद्यार्थीहरु देख्छु, मलाई निकै आनन्दको महसुस हुन्छ ।
कति विद्यार्थी लिएर आइईसी सुरु गर्नुभएको थियो ?
मैले सुरुमा १३ जना विद्यार्थी लिएर यो कलेजको सुरुवात गरेकी थिए । तर, त्यो नम्बर मेरा लागि निकै लक्की सावित भयो । १३ जनाबाट सुरु गरेको कलेज अहिले बागबजारमा मात्रै ३ सय ५० जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरु फेशन डिजाइनिङ पढ्छन् । ९० जनाजति इन्टेरियर डिजाइनिङ पढ्छन् । अहिले हेर्दाखेरि मलाई निकै खुशी लाग्छ । किनभने नेपालमा मैले दुई वटा करिअर प्रस्पेक्टीभ लिएर आए—एक फेसन डिजाइनिङ र अर्को इन्टेरियर डिजाइनिङ । दुवै करिअर ओरेन्टेड विषय भएकाले यी विषय पढ्ने विद्यार्थीहरु सजिलै जागिर र आफ्नै ब्यवसाय सुरु गर्न सक्छन् । अहिले हाम्रा उत्पादनहरुले ठूला—ठूला बुटिक, एक्पर्ट हाउस चलाउँछन् । हाम्रो कलेजका कतिपय उत्पादनहरुको त ४÷५ सय स्टाफ पनि छन् । यो सबै देख्दा त्यो बेला मैले ठीक गरेछु भन्ने अनुभूति हुन्छ ।
अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
त्यतिबेलाको इन्भेष्टमेण्टले अहिले मलाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेको छ । केही समय पहिले मात्रै चीनमा आइईसी कलेजले एसियाको टप फेसन इन्स्च्युसनको पुरस्कार पायो । नेपालजस्तो देशबाट त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं, हाम्रो प्रतिस्पर्धीका रुपमा मलेसिया, कोरिया र भियतनामसहित ५ देशका प्रतिष्ठित कलेजहरु थिए । मैले त्यहाँ त्यो अवार्ड पाउँछु भनेर सोचेकी पनि थिइन् । तर, आइईसी कलेजको कन्ट्रीब्युसन र सबै अवस्थाको बारेमा हेरिसकेपछि हामीलाई एसियाको टप फेशन अर्गनाइजेशनको अवार्ड दिइयो । त्यो हाम्रा लागि निकै ठूलो गौरवको विषय थियो । यो एवार्ड विद्यार्थीहरुको क्रेटिबिलिटी, इन्टरनेशनल मार्केटमा उनीहरुको एक्स्पोजर र योगदानका आधारमा एवार्ड दिइएको हो । अहिले नेपालमा फेसनको मार्केट जसरी बुमिङ भइरहेको देख्दा मलाई खुशी लाग्छ ।
हामीले सन् २००४ मा नेपाल ‘फेसन वीक’को पनि सुरुवात ग¥यौं । अहिले ‘टीजीआइएफ फेसन वीक’का रुपमा हिमालयन टाइम्ससँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौं । अहिले म के फिल गर्छु भने हामीले गरेका यी सबै प्रयासहरु सकारात्मक थिए ।
अब के सम्भावना देख्नु हुन्छ ?
अब त मानिसलाई फेसन डिजाइनिङका विषयमा सिकाउनै पर्दैन् । म सम्झन्छु, जतिबेला हामीले पढाउन सुरु गरेका थियौं, मानिसहरुलाई बुझाउँदा पनि यो विषयमा बुझ्न सकिरहेका थिएनन् । विद्यार्थीका अभिभावकहरु बुझ्न आउँदा यो के साँच्चै काम लाग्छ र म्याम ? भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । मेरो पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरु जस्तो तरुणिका महतो, हर्षिया बानुलगायतका विद्यार्थीहरु र दोस्रो ब्याचका विद्यार्थीहरु धेरै राम्रो गरिरहेका छन् ।
अहिले हामी कहाँ फेसन डिजाइनिङ र इन्टेरियर डिजाइनिङबारे बुझ्न आउने विद्यार्थीहरु हामीभन्दा बढी बुझेका हुन्छन् । उनीहरु अहिले नै भन्छन् हामीले यहाँ पास गरेपछि बाहिर कहाँ काम गर्ने, कहाँबाट माष्टर्स गर्ने उनीहरु सबै विषयमा तयार देखिन्छन् ।
एउटा फेसन डिजाइनर वा इन्टेरियर डिजाइनर बन्न कति समयको कोर्स गर्नुपर्छ ?
ब्याचलरको कोर्स तीन वर्षको हुन्छ । यसका लागि प्लस टु पास गरेको हुनुपर्छ । तीन वर्षमा फुलटाइम ६ देखि ८ घण्टासम्म पढ्नुपर्छ । तीन वर्षमा पनि क्रेडिट आवर धेरै हुन्छ । धेरै क्रेडिट आवर भएकाले हामीले कहिलेकाही शनिबार पनि क्लास लिनुपर्छ र छुट्टीहरुमा पनि क्लास लिनुपर्छ । बीबीए कोर्सहरुभन्दा पनि बढी आवर पढाउनुपर्छ । डिप्लोमाको कोर्स गर्ने हो भने त्यो १५ महिने कोर्स हुन्छ । यो कोर्स गर्नका लागि एसएलसी पास भएको हुनुपर्छ । जसमा २ देखि ४ घण्टा क्लास हुन्छ ।
शुल्कका हिसाबले कस्तो पर्छ ?
विश्वब्यापी रुपमा नै हेर्ने हो भने फेसन डिजाइनिङ र इन्टेरियर डिजाइनिङ महंगो कोर्स हो । ब्याचलरमा बीबीएभन्दा पनि महंगो छ । ब्याचलर गर्नका लागि झण्डै ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । डिप्लोमा गर्नका लागि ८५ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँ लाग्छ । यो डिप्लोमा १५ महिने प्रोफेसनल कोर्स हो । यो इन्टरमिडियट नभएर इन्डीपेन्डेन्ट कोर्स हो ।
फेशन डिजाइनिङ र इन्टेरियर डिजाइनिङको क्षेत्र ब्यापक बन्दैछ । विद्यार्थीहरु ब्याचलर्स गरेपछि कति पैसा कमाउन सक्छन् ?
ब्याचलर गरिसकेपछि तपाईंको स्टाटिङ स्यालरी नै २० देखि २५ हजारसम्म हुन्छ । तर, धेरैजसो ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थीहरुको टार्गेट विदेश हुन्छ । नेपालमै पनि हामीले तीन महिने इन्टरनसीप राखेका हुन्छौं, त्यस लगतै उनीहरु २० देखि २५ हजार तलब सजिलै पाउँछन् ।
डिप्लोमा गर्नेहरुको तलब कतिसम्म हुन्छ ?
फेशन डिजाइनिङजस्तो विषयमा डिप्लोमा पनि धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ । त्यसमा तपाईको क्यालिभर र क्रियटिभिटीमा भर पर्ने हो । डिप्लोमा गर्नेहरुको पनि सुरुवाती तलब १७÷१८ हजारदेखि माथि नै हुन्छ ।
विदेशमा कुन—कुन देशमा नेपाली फेशन डिजाइनरहरुलाई अवसर छ ?
अहिले धेरैजसो हाम्रा विद्यार्थीहरु अमेरिकामा छन् । यसबाहेक बेलायत, अष्टे«लियामा पनि हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरु छन् । अहिले आएर हाम्रा धेरैजना विद्यार्थीहरु फ्रान्स गइरहेका छन् । उनीहरुले त्यहाँका बुटिकहरुमा जागिर पनि गरिरहेका छन् । यस वर्षमात्र मेरा तीन जना विद्यार्थीहरु पेरिस पुगेका छन् । यसबाहेक पछिल्लो समय युरोपियन देशहरुमा धेरै विद्यार्थी गइरहेका छन् ।
एउटा राम्रो फेशन डिजाइनर हुनका लागि के क्षमता हुनुपर्छ ?
तपाई आफूले देखेको भन्दा बाहिर सोच्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । माइण्ड सबैको क्रियटिभ हुन्छ, तर हामीले त्यसको उपयोग गरेका हुँदैनौं । खादा, बस्दा, उठ्दा पनि क्रियटिभ थिकिङ गर्नेहरुले यो पेशा छान्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । डिजाइनरले हरेक समय सोचेर बस्नुपर्छ । हरेक ठाउँमा पार्टी जाँदा होस् वा फिल्म हल वा बाटोमा हिडिरहेका बेला नै किन नहोस सिक्न र नयाँ सोच्नका लागि दिमागलाई क्रियाशील बनाइरहनुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सधैं प्यासन हुन जरुरी हुन्छ । यो त्यस्तो पेशा हो जहाँ निरन्तरता र लगनशीलता पनि उतिकै जरुरी हुन्छ । १८ घण्टा काम गर्ने प्यासन भएकाहरुले रोज्नुपर्छ । यो फिल्डमा नेम, फेम र मनी सबै कुरा छ । यी सबैका लागि त्यतिकै हार्ड वर्क पनि चाहिन्छ । हार्ड वर्क गर्नेहरुले पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन् ।
भविष्यको सपना के छ ?
अबको मेरो सपना एउटा होटल म्यानेजमेण्ट र एमबीए कलेज खोल्ने छ । म त्यसका लागि निरन्तर कोशिश गरिरहेकी छु । एजुकेशन सेक्टरमा मेरो प्रिस्कुल, स्कुलदेखि प्लस टु कलेज आउदैंछ । ब्याचलरमा अहिले फेसनमात्रै छ अब अरु फ्याकल्टीमा पनि हात हाल्ने योजना छ । एजुकेशनका लागि आइईसी ग्रुपलाई एक हबका रुपमा विकास गर्ने मेरो सपना छ । र पछि देशको सेवा गर्ने पनि मेरो ठूलो इच्छा छ । राजनीतिमा आएर देशलाई केही गरौ भन्ने पनि मेरो भविष्यको योजना छ । पैसा मात्र पनि कति कमाउने, समाजलाई पनि त केही दिनुप¥यो ।
गाउँपालिकाको सेवा हुनु त यस्तो पो 2020-03-19 13:57:25
एसइई परीक्षा केन्द्र सुनसान, विद्यार्थीसँग क्षमा माग्दै प्रश्नपत्र सुरक्षित गर्न बोर्डको आग्रह 2020-03-19 13:55:49
शैक्षिक परामर्श र तालिमका कार्यक्रम पनि बन्द 2020-03-19 13:54:44
एसईई स्थगित 2020-03-18 19:41:56
स्मार्टबोर्डबाट पठन पाठन भएपछि छात्रछात्रा खुशी 2020-03-10 14:50:33
त्रिविको परीक्षा यथावत् 2020-03-10 14:44:44
आठ विद्यालयको पुनर्निर्माण हुँदै 2020-03-10 14:43:37
‘वर्ष ५७ का जुँगेबहादुर कक्षा २ मा’ 2020-03-10 14:42:04
पदपूर्ति प्रक्रियालार्इ नियमित गर्न पनि सकिन्छ 2017-07-16 18:59:46
१०० क्याम्पसमा जित्दै अनेरास्ववियु पहिलो र नेविसंघ दोस्रोमा 2017-03-02 19:12:34
युवा ब्यवसायी निभेन, जसले १०० बढीलाई रोजगारी दिएका छन् 2017-03-15 09:50:19
कुन ग्रेडकाले कुन विषय पढ्न पाउनेछन्, १२ समूहमा यसरी लिइनेछ भर्ना 2016-06-16 08:52:55
यी हुन् उपत्यकाका नाम कहलिएका १० महंगा कलेज, कसको शुल्क कति ? 2016-07-05 17:28:06
यी हुन् सबैभन्दा कम उमेरमा पिएचडी गर्ने व्यक्तिहरु 2017-03-19 19:43:08
‘अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जेनयुन टेम्पोररी इन्ट्यान्ट (जीटीई) हो’ 2016-09-14 10:50:49
४२ उमाविलार्इ ११ कक्षामा थप विषय पढाउने अनुमति, ४ नयाँ विद्यालयले ११ कक्षा पढाउने अनुमति पाए 2016-09-04 09:57:43
Copyright © 2020, All rights reserved at Educationsamachar.com
Powered at : Techie IT
Education Samachar is country’s younger online portal operated by Pipalbot Incorporation. It isacomplete news portal focused on education field; includes special reports, opinion, blog, interview, news & educational activities.